उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको चुनाव | चितवन पोष्ट
गृह » उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको चुनाव
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको चुनाव
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ७ बस्ने उदय अधिकारीले आफू राजु श्रेष्ठको पक्षमा भएको तर सहन प्रधानले जित्ने खतरा रहेको बताए । आफू मतदाता नभएपछि किन यो पक्ष वा त्यो पक्षमा ? भन्ने प्रश्नको उनले बडो गतिलो जवाफ यसरी दिए– “अमेरिकामा हिलारी क्लिन्टन र डोनाल्ड ट्रम्पका बीचमा चुनाव हुँदा त कोही हिलारी र कोही ट्रम्पको पक्षमा हुन्छन् भने राजु र सहनको बीच चुनाव हुँदा यताउता मान्छे नलाग्ने त सवालै भएन नि ।”
यसपटक सहनले चुनाव जित्छन् वा राजुले ? भन्ने थुप्रै मानिसहरुसँग प्रश्न सोधियो । धेरैले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न चाहेनन् । सायद, उनीहरु राजु र सहनसँग डराए । धेरैले धेरैथरी तर्कसाथ यसले जित्ने उसले जित्ने भने । अगाडि पर्दा राजुजी भन्नेहरुले पछाडि टाटे राजु भन्दा रहेछन् । अगाडि सहनजी भन्नेहरुले घमण्डी सहन भन्दा रहेछन् । यो त सामान्य विषय भयो । कसैले राजुलाई जिस्क्याएर टाटे भन्नु र कसैले सहनलाई घमण्डी भन्नु कुनै ठूलो विषय होइन । काले, च्यान्टे, गुइँठे, डल्ले, मोटे, छोटे, डेडे, मुसे, ढँटुवा, हावादारी, पुन्टे, कुरौटे, छुल्याहा, टाटे, ओठे, दयालु, घमण्डी, मूर्ख, विद्वान्, सन्काहा, हुल्याहा, फटफटे, डुलुवा आदिले नेपाली नागरिक समाजमा सम्बोधन गर्ने चलन छँदै छ । यसो भन्दा कोही रिसाउँदा पनि रिसाउँदैन र खुसाउँदा पनि खुसाउँदैन । राजुले चुनाव जित्छ भन्नेहरुले राजु औधी फूर्तिलो भएको, जाँगरिलो भएको, उद्योगी व्यवसायीहरुलाई जतिबेला जहाँ आपतविपत् पर्छ, त्यहाँ राजु पुग्छन् र मद्दत गर्छन् भने । सहनले जित्छ भन्नेहरुले सहन भलाद्मी छ, ठिक्क अड्कलेर बोल्छ, गहिराइमा पुगेर कुरा बुझ्छ अनिमात्र निर्णय गर्छ, सङ्लो मनको छ, खुबी पनि छ त्यसकारण यसपटक चुनाव सहनले जित्छ भने । यस्ता खाले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नेहरुमध्ये अधिकांशलाई उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको इतिहासबारे सामान्य जानकारी पनि रहेनछ । उनीहरुले पनि यो संघको इतिहास जान्नुपर्छ । यो कलमलाई थाहा भएअनुसार उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको इतिहास यस्तो हो ।
चितवनमा घना जंगल थियो । जंगली जनावरको डरको कुरा बेग्लै भयो, लामखुट्टे लाग्थ्यो र लामखुट्टेको टोकाइबाट औलो रोग लाग्थ्यो । उतिबेला औलो रोगको ओखती थिएन । औलो रोग तिनलाई लाग्थेन वा लामखुट्टेभन्दा तिनीहरु शक्तिशाली थिए । कारण जेसुकै भए पनि थारु समुदायका मानिसहरु चितवनमा बस्थे । चितवनको मानव समुदायमा यो समुदाय नै सबैभन्दा पहिला चितवन बस्नेहरु हुन् भन्ने भनाइ छ । नेपालको नेवार समुदायलाई व्यापार गर्ने समुदायका रुपमा आज पनि व्याख्या गरिन्छ, पहिले त हुँदै हो । सायद बन्दीपुरतिरबाट हुनुपर्छ, केही व्यापारी नेवारहरु नारायणी नदीकिनारमा आएर बसे र तिनले व्यापार सुरू गरे । त्यतिबेला नुन र कपडा बेच्ने नेवारहरु पछिल्ला दिनमा अरु सामान बेच्न थाले । नदीछेउछाउ सानासाना झुपडीमा बस्ने नेवारहरु पहिला आर्थिक हिसाबले निकै गरिब थिए । कतिपय नेवारहरु त गाउँतिरबाट मान्छे मरेर घाट ल्याउँदा मलामीहरुलाई पुरी–तरकारी बेच्थे । मलामी तिनका ग्राहक थिए । कहिले मलामी आउलान् र पुरी–तरकारी बेच्न पाइएला भनी ढुकेर बस्थे । पछि जनसंख्या बढ्दै गयो । नारायणगढ बजारका रुपमा विकसित हुँदै गयो । नारायणी नदीमा बाढी आउला र बगाउला भन्ने डरले जगतपुर र माडीतिर लागेका अरु समुदायका मान्छेहरुको जग्गाको मूल्य बढेन, तर हिम्मत गरेर नारायणगढ बस्ने नेवारहरुको जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । यसकारण बजारियाहरु धनी बने । हिजो मलामीहरुलाई पुरी–तरकारी बेच्नेहरु प्रायः मरिसके । सानो संख्यामा बाँकी होलान् । आज धनी भएका केटाहरु भूतपूर्व गरिबका सन्तान हुन् । तिनै गरिबहरु मध्येकाले आजको नारायणगढलाई “नारनघाट” भन्न थाले । पछि “नारायणघाट” भयो र धेरै पछि यही ठाउँलाई आजको नारायणगढ भनियो । तिनै नेवारहरु संगठित भएर “नारायणघाट व्यापार संघ” जन्माए । जनसंख्या बढ्दै गयो । नाम परिवर्तन गर्न ठीक हुन्छ भन्ने सोचियो होला सायद र यो संघलाई “उद्योग वाणिज्य संघ–नारायणगढ” भनियो । केही वर्षअघिमात्रै यसलाई फराकिलो बनाउने सोचले मूर्तरुप लिन गयो र समग्र चितवनलाई समेट्ने हिसाबले “उद्योग वाणिज्य संघ–चितवन” राखियो र अहिले त्यही उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अधिवेशन हुँदैछ । नेतृत्व छान्ने यही अधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा बस्ने रहरले राजु र सहन दौडधूप गरिरहेका छन् ।
उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच मुखामुख चलिरहेको छ । अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई खरानी पारिदिन्छु भन्छ । उत्तर कोरियाले पनि वासिङ्टनसम्म बम हान्न सक्छु भन्छ । डोनाल्ड ट्रम्प किम जोङ उनलाई पागल फुच्चे भन्छन् भने किमले ट्रम्पलाई सन्काहा बूढो भन्छन् । यिनको मौखिक द्वन्द्व सुनिरहेका विश्व मानव कोही किमतिर लाग्छन् त कोही ट्रम्पतिर लाग्छन् । लाग्छन् तर फोकटमा लाग्छन् । न केही पाउनु न केही गुमाउनु । शतप्रतिशत फोकटमा लाग्छन् । यो मानव स्वभाव हो । जर्मनी र इटालीबीच फुटबल खेल भइरहेको छ । बातिरको नाता होइन न त आमातिर कुनै साइनो छ, तैपनि मान्छेहरु कोही जर्मनीतिर लाग्छन् त कोही इटालीतिर ढल्किन्छन् र “गोल गोल” भन्दै चिच्याउँछन् । यहाँ पनि कुरा फोकटकै हो । राजुले जिते नेपाली नागरिक समाजलाई के हुन्छ ? वा सहनले जिते यो देशको मुहार कहाँनेर परिवर्तन हुन्छ ? भए त्यही व्यापारीहरुलाई कर, राजस्व र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा समन्वय गर्न थोरै मद्दत मिल्ला । यो मद्दत राजुले गर्दा दुनियाँलाई के हुने र सहनले गर्दा नेपाली जनतालाई के फाइदा हुने ? कुल मिलाएर यो फोकट खाले मुद्दामा धेरै मान्छेहरु राजु कि सहन भनिरहेका छन् । सबका सब फोकट मुद्दामा यता कि उता लागेपछि यो कलम पनि यता कि उता भन्नेमा त मुछिनै पर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरुका लागि मेरो जवाफ यस्तो छ–पत्रकार वीरेन्द्रमणि राजु वा सहनको पक्ष वा विपक्षमा छैन । तर्कसहित सहनले जित्छन् भन्नेमा छ । कसैले पत्याउला वा नपत्याउला, पत्याउन नपत्याउन पाइने स्वतन्त्रता हरेकलाई छ । मैले आजसम्म नेपालको हकमा जति पनि भविष्यवाणी गरेको छु, त्यो सबै ट्वाक्कै जस्ताको तस्तै मिलेको छ । केही प्रमाण र उदाहरणहरु यस्ता छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई अमेरिका जाँदा नभेट्ने, भारतमा नेपालका सात राजनीतिक दल र माओवादीबीचको एकता र भारतले नेपाललाई गर्दै आएको व्यवहारलाई हेर्दा मैले “अब नेपालको राजतन्त्र खतरामा प¥यो” भनेको थिएँ, तर पत्याएको भने कसैले थिएन । राजतन्त्र समाप्त भयो । वैज्ञानिकहरु गलत हुन्नन् । नेपालमा कुनै पनि बेला भूकम्प जान सक्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै मैले लेख लेखेको लेख्यै गरेँ । तर, कसैले सुुनेन । आखिर २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले झन्डै १० हजार नेपालीलाई मा¥यो । चुनाव सकिएको साँझ मैले विक्रम पाण्डेलाई प्रचण्डले १० हजार भोटले पछार्छन् भनेँ । मैले यसो भन्न सक्नुमा गीतानगरको बुथ र पार्वतीपुरको बुथमा कांग्रेस समर्थकहरुले ख्वात्तै प्रचण्डलाई भोट दिए । मैले मतदाताहरुलाई नै सोधेको थिएँ । भनेकै कुरा मिल्यो । विक्रमको भन्दा प्रचण्डको झन्डै १० हजार भोट ज्यादा आयो ।
मेरो अर्को भविष्यवाणी थियो– “प्रचण्डकी छोरी रेणुले जसरी पनि मेयर पदमा चुनाव जित्छिन् ।” मेरो कुरा सुनेर सबै हाँसे । दिनका दिन भेट हुने हुँदा सहिदचोकका बाले दाइ, शिव पण्डित, मुक्ति पिया, राजु पिया, वामदेव शर्मा, रमेश जोशीहरु त दिनका दिन हाँस्थे । मणिभद्र कँडेल त एकातिर नपत्याउने र अर्कोतिर पीर मान्ने स्थितिमा थिए । तर, मेरो कुरा ठ्याक्कै मिल्यो । रेणुले जसरी पनि चुनाव जितिन् । अब मेरो भविष्यवाणी सहनले चुनाव जित्छन् भन्ने छ । कारणहरु यस्ता छन् ः
सबैभन्दा पहिलो र सशक्त कारण के हो भने सहनलाई यसपटक सबै भूतपूर्व अध्यक्षहरुले साथ दिएका छन् । भूतपूर्व अध्यक्षहरुको यसै पनि प्रभाव हुन्छ भने मेहनत र बुद्धिका हिसाबले पनि यिनीहरु निकै तेज छन् । मदनलाल जोशी सहनलाई जिताउन काठमाडौँबाट चितवन आएका छन् । यिनको प्रभाव नारायणगढमा राम्रो छ । डा. तिलचन्द्र भट्टराईलाई एमाले समर्थक दिग्गज भनिन्छ । यिनको प्रभाव सिंगो चितवनमा छ । यिनी पोल्ट्री सेक्टरका हस्ती पनि हुन् । यिनले यो कलमसँग यसपटक सहनलाई अध्यक्ष बनाउँदा ठीक हुन्छ भनेका छन् । मित्रराज दवाडीको नाम प्रचण्डको साथीका रुपमा प्रचारित छ । यिनी पनि प्रभावशाली छन् । कल्याण जोशी हेर्दामात्रै फुच्चे हुन् । यिनलाई मन पराउनेको संख्या सोचेभन्दा ज्यादा छ नारायणगढ इलाकामा । रमेशकुमार पियालाई सज्जन नेवार भन्नेहरु अरु समुदायमा पनि बग्रेल्ती छन् । उत्तमलाल चुकेको पनि नारायणगढमा राम्रो पहुँच छ । यस्ता पुराना अध्यक्षहरुको साथ र सहयोग सहनलाई छ भने के. एल. भूषण सहनका पिता हुन्, जसलाई नारायणगढभरि “आँखामा राखे पनि नबिझाउने मान्छे” भन्ने गरिएको छ । महेन्द्रलाल प्रधान त नारायणगढका हस्ती नै भैगए । अतिरिक्त कारण यो छ कि सीधा घोषणा र ठाडै हस्तक्षेप गर्न नमिलेका कारण यसपटक कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता चितवनका दादा पार्टीहरुले पनि खुसुक्क सहन प्रधानलाई जिताउन सर्कुलर जारी गरेको खबर प्राप्त भएको छ । ९८ प्रतिशत मतदाता यिनै तीन दादा पार्टीलाई भोट हाल्ने मान्छेहरु हुन् । माडीदेखि भण्डारासम्मका मान्छेहरुबीच कुरा बुझ्दा यसपटक सहनले जित्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अब निष्कर्ष यो हो कि यो लेख कहीँकतै पनि कसैलाई जिताउने वा हराउने उद्देश्यले लेखिएको होइन । कसैको जित वा हारले समाज परिवर्तन हुन्थ्यो भने, मुलुकबाट आर्थिक भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्थ्यो भने, देशको कायापलटै हुन्थ्यो भने साइड लाग्न पनि हुन्थ्यो । साइड नलागी व्याख्या र भविष्यवाणी मात्रै गर्न परेको कारणचाहिँ यत्ति हो कि मान्छे फलामको रडजस्तो ठाडो उभिन नसक्ने, कतै न कतै विचारका हिसाबले ढल्किने भएको हुनाले मात्रै यति शब्द लेखिएको हो, अरु कारण छैन ।
अग्निपरीक्षाको घडीमा केपी ओली र प्रचण्ड